Iihotele ezikufutshane neMiami Cruise Ports - I-Cruise Port
Ukutya Products Ne Aids
Iincwadi Zescrapbook Themes
Iihotele ezikufutshane neMiami Cruise Ports
Ishicilelwe ' Inqanawa yokuhamba ngenqanawa kwiHlabathi liphela , 'IPortMiami ikhonza izigidi zabakhweli minyaka le. Indawo yayo efanelekileyo yeBiscayne Bay iikhilomitha ezisibhozo empuma yesikhululo senqwelomoya saseMiami kwaye ngaphesheya kwendlela esuka edolophu yedolophu yaseMiami likhaya kwiitheminali ezininzi ezisetyenziswa yimizila yeenqanawa ezingama-20 ezinamajelo angama-55. Uya kufumana ukhetho olufanelekileyo lweehotele kwiibakaki zamaxabiso ezahlukeneyo kumgama omfutshane wokuhamba kwezibuko.
Iihotele zangoku zedolophu
Isakhiwo sangaphambi kwesakhiwo saseMiami sithetha ukuba akukho kunqongophala kwegama lophawu olukhulu kwiihotele zangoku kufutshane nendawo yokugcina iinqanawa. Abanye banendawo yenkomfa yokutsala iintlanganiso kunye neendibano ngelixa abanye benokuhambisa uvakalelo olusondeleyo.
Zothutho ezisuka eFort Lauderdale Cruise Ship Terminal
Ukuhamba ngenqanawa ukusuka eFort Lauderdale
Phakathi koLwandle lwaseSouth kunye nedolophu yedolophu, engaphantsi kweekhilomitha ezintlanu ukusuka kwisikhululo senqanawa, amagumbi kunye nesuti IsiMandarin saseMpuma Zonke zinebhalkhoni ejonge amanzi okanye umbono wedolophu. Kubahambi abanomdla wokuqalisa ukonwaba ngesimbo kwanangaphambi kokuba kuhambe inqanawa, iinkwenkwezi ezintlanu zaseMandarin zaseMpuma zinechibi elinomda ongapheliyo, ulwandle lwangasese olwenziwe ngabantu, kunye ne-spa yosuku olungaqhelekanga. Amaxabiso asebusuku aqala kwi- $ 399 kwigumbi ngalinye.
lubonakala njani uphawu lwe-virgo
Ihotele iBeaux yobuGcisa, Ukuqokelelwa kweAutograph
Imfesane kwaye inesitayile, le hotele iphakamileyo yokunyuka kwamagumbi engama-44 ineephuli ezinophahla ezinophahla olunamanzi ashushu. Ihotele-ngaphakathi-ehotele kwimigangatho 38 ukuya kuma-40 ngaphezulu kweJW Marriott Marquis. Iibhedi ezinde ezinde kunye nobubanzi obongezelelweyo ziyafumaneka xa ziceliwe kumagumbi eendwendwe ngobuchwephesha bokugqibela obuchukumisayo. Iimayile ezine ukusuka kwisiphelo sendlela yokuhamba ngenqanawa, abahambi banokungena kuqeqesho lwangaphambi kokuhamba ngenqanawa e Ihotele yeBeaux yobuGcisa 'igalufa ebonakalayo, i-bowling, kunye nenkundla yebhola yebhasikithi epheleleyo. Amaxabiso aphuma kwi-332 yeedola ngezahlulo ezingcono zamalungu eMbuyekezo eMarriott.
Ukwahlula ngokulinganayo phakathi Iihotele eziphambili zaseMiami nguConde Nast Traveler, I-Kimpton EPIC obunye ubuhle kuludwe lwedolophu lweedolophu eziphakamileyo. Amagumbi eendwendwe aneefestile zomgangatho wophahla kunye neebhalkhoni zabucala zikumgangatho we-18 ukuya kuma-30 wesakhiwo esime setyhula esijonge eBiscayne Bay. Yitya kwindawo evulekileyo yomoya kuMmandla wama-31 ukuya kuthi ga kwiimbono ezisemazantsi kwiikhilomitha ezimbini ukusuka kwisikhululo senqanawa. Amalungu omvuzo we-IHG, abadala, kunye namalungu e-AAA bafumana amaxabiso awodwa aqala kwi- $ 322 ngobusuku kwaye iindwendwe zinokucela amaxabiso egumbi elide elinebhedi engama-intshi ezi-96 kunye nentloko yeshawa.
Ukuba ujonge ukuntywila kwisanti nakwilanga, nokuba ngaphambi okanye emva kokuhamba ngenqanawa, ezihotele zaseMiami ezingaselunxwemeni zinika amava amabi.
Xa kuphela iphuli kunye nonxweme oluya kwenza, Ukubheja ikalwe 'ngokugqwesileyo' okanye 'intle kakhulu' uninzi oluninzi Ababuyekezi beendwendwe kwi-TripAdvisor. Abafundi beConde Nast bayavuma, banike indawo ezimeleyo, enegumbi elinama-61, ihotele ethengisa ilanga egcwele indawo kwindawo Uluhlu lwegolide luka-2017 kwezona zilungileyo emhlabeni. Hamba uye kuyo yonke into eSouth Beach kwaye ufumane iteksi yokuhamba iimayile ezintandathu ukuya kwisikhululo seenqanawa. Amaxabiso aqala malunga ne- $ 499; Iirhafu ezikhethekileyo zisebenza kumalungu e-AAA kunye ne-AARP.
Iikhilomitha ezintandathu ukusuka kwizibuko lokuhamba ngenqanawa kunye nasekhaya ukuya kwiklabhu yasebusuku yeWALL, U-South Beach Ungagcina umdaniso ubetha ngaphambi okanye emva kokuhamba ngenqanawa. Emini, sebenza kwiinkundla zentenetya nophahla lwebhasikithi okanye uboleke ibhayisekile. Ngaphandle koko, khululeka kwi-spa, kwindawo yokufihla echibini ecaleni komqolo wemithi yesundu, okanye phantsi kwesambulela esantini. Amanyathelo asuka elwandle, kukho izimvo ezivela kwigumbi ngalinye. Imirhumo yeholide ichaphazela amaxabiso asuka kwi- $ 415, kunye nezibonelelo zamalungu akhethiweyo e-Starwood.
Indawo yakudala yeNdawo yeHlabathi yeGalufa
Kulungiselelwe abo bakhetha umoya wexesha elidlulileyo lobungangamsha kunangoku kunye nefashoni, iBiltmore Hotel iya kubhena. Kwii-Coral Gables, uya kuziva isigidi seemayile ukusuka kwindawo entle yokuphakama eMiami, ukanti usaya kuba kukufutshane kufutshane kwisikhululo seenqwelomoya nakwisikhululo seenqanawa.
Ihotele yaseMiami Biltmore
Ukufumana amava okonwaba ngaphambi okanye emva kokuhamba ngenqanawa, i-1926 entle Ihotele yaseBiltmore icwangciswe ngaphakathi kwindawo ebhabazelayo enikezela ukutya okumnandi, ikhosi yegalufa yobuntshatsheli, iklabhu yentenetya, i-spa, kunye nenye yeMelika amachibi amakhulu angaphandle . Ilungu leehotele eziKhokelayo zeHlabathi, iAAA ezine zeDiamond award hotel features isimbo esahlukileyo seMeditera. Kwiindawo ezintle zeCoral Gables kunye nedolophu yedolophu iMangaliso Mirile kunye Iivenkile eMerrick Park , Umhlaba ophawulweyo ziikhilomitha ezili-11.5 ukusuka kwizibuko. Iirhafu ezivela kwi- $ 424 zibandakanya i-Wi-Fi kunye nesidlo sakusasa.
Iihotele zeeNkwenkwezi ezine
Amalungu okunyaniseka kweendwendwe ehotele anokukhetha ukwandisa amanqaku okanye afumane amaxabiso awathandwayo xa ujongana nepropathi enkulu ekumgangatho wedolophu kufutshane nePortMiami.
IHilton Miami Downtown
Iikhilomitha nje ezimbini ukusuka kwisikhululo senqanawa, IHilton Miami Downtown ineedolophu kunye neembono zedolophu kumagumbi ayo abanzi angama-600 kunye nezikhuselo. Iindwendwe zikhankanye indawo efanelekileyo yehotele, iphuli yangaphandle, iziko lokuqina, kunye nexabiso lesidlo sakusasa kunye nephakheji ye-Wi-Fi. Amaxabiso aphuma kwi- $ 299, isaphulelo ngokuxhomekeke kubukho ngeHilton Honours; kunye ne-AARP, ubulungu be-AAA; okanye isazisi sikarhulumente okanye somkhosi.
yenza amehlo aluhlaza kunye neenwele ezimhlophe
Jonga iinqanawa zokuhamba ngenqanawa ukusuka echibini eliseluphahleni kunye neembono zeBiscayne Bay. Inkqubo ye- InterContinental Miami yinkwenkwezi-ezine Abahloli beeNqanawa zabaKhenketho abaThandayo . Ziimayile ezimbini kuphela ukusuka kwisikhululo seenqanawa, ihotele enamagumbi angama-650 kunye namagumbi okutyela aziwa ngokuhamba kwayo. Umcebisi wohambo ISatifikethi sokuGqwesa Ukukhetha, iirhafu zivela kwi- $ 355 ngobusuku bonke, ziphezulu kancinci kumagumbi eeklabhu zangaphakathi kunye nokufikelela kwigumbi lokuhlala kubandakanya ukutya kwasekuseni okuncomekayo kunye nokutya okuhlwa.
Ixabiso kunye neehotele zoSapho
Abahambi ngeenqanawa bangafumana uninzi lokongezwa kwihotele enazo zonke izinto eziphawula zonke iibhokisi ngaphandle kokuchitha ngaphezulu okanye ukubingelela ngendawo encinci.
I-Homewood Suites nguHilton Miami Downtown / Brickell
Umcebisi ababuyekezi cebisa I-Homewood Suites nguHilton Miami Downtown / Brickell ngesidlo sakusasa esishushu simahla, iisuti eziphangaleleyo, izibonelelo ezizodwa, kunye nezaphulelo kubantu abadala, kwiintsapho nakwabanye. Iyamangalisa, utsho u Yehova Indawo yokubhukisha.com ngenqanaba 'elihle'. Ukugcina ixesha kunye nemali, abakhweli beenqanawa banokukhetha amaxabiso egumbi lokufaka iipasile ukubandakanya ukudluliselwa kwesikhululo seenqwelomoya (iikhilomitha ezisixhenxe), ukuhanjiswa kwesikhululo seenqanawa (iimayile ezimbini), okanye ukupaka iimoto kwindawo. Amaxabiso asuka kwi- $ 222 abonelela ngamanqaku aphindwe kabini kwi-Hilton Honours.
Isikhululo senqwelomoya saseCrowne Plaza Miami
Abahambi ngeenqanawa abanqwenela ukubhukisha i-214 yeedola ebusuku Isikhululo senqwelomoya saseCrowne Plaza Miami Iphakheji ebandakanya isidlo sakusasa ezimbini kunye nendlela enye ye-12 emini yokutshintshela kwizibuko laseMiami kunye nokupaka imoto enye ukuya kwiintsuku ezisixhenxe. Okanye, thatha i-shuttle yeeyure ezingama-24 yasimahla kwisikhululo seenqwelomoya okanye upake ngokwakho kwi-17 yeedola ngosuku. Ifunyanwa kwiikhilomitha ezisixhenxe ukusuka kwizibuko, ipropathi ye-IHG ejolise kusapho ine-Wi-Fi yasimahla kunye nedama langaphandle elinendawo yokuhlala eqala kwi- $ 166 ngobusuku bonke.
Qaphela iiNtlawulo zeehotele ezongezelelweyo
Abahambi ngobusuku eMiami kufuneka baqaphele ukuba zonke iihotele zirhafu ukuthengisa okunyanzelekileyo kunye nerhafu yegumbi ngobusuku bonke ezicatshulweyo ukongeza kwinqanaba legumbi. Iihotele zaseMiami ziipesenti ezili-10; Iihotele zaseMiami Beach ziipesenti ezili-13. Ezinye iihotele zinokufumana indawo yokuhlala okanye indawo yokuhlala ezidolophini ezingama- $ 20 ukuya kwii-30 zeedola kwigumbi ngalinye ngobusuku obongeziweyo emva kwerhafu. Iinkcukacha zikwiinkcukacha zokubhukisha okanye ngokubuza iarhente yokubhukisha ehotele, iarhente yokuhamba, okanye ummeli wearhente yokubhukisha ekwi-Intanethi.
Malunga Izinwele Isinxibo Sendoda Iimveliso Zefeng Shui Malunga Facebook Iinkonzo Zematriki Citizen
Amakhethini E Dapes
Uthethathethwano Ring Basics
Umlibo Wokuzalwa Uphando
Iinkonzo kunye neengozi zokuhonjiswa ngokudibeneyo
kuchaphulo olu malunga nothando lwabazalwana nodade
izimvo zetheko leholide malunga nomsebenzi
loluphi uhlobo lwejusi olucoca iipeni ngeyona ndlela
iindlela ezintle zokuxelela intombazana oyithandayo
indlela yokulahla amabala egazi elomileyo
incwadi yothando emfazini womyeni
Abantwana'ukupheka Ne Iindlela Zokupheka
Imisebenzi Ye Abadala
Enye Indlela Izinwele
Iiproteni Source For Vegetarians